Maxay tahay sababta ay Itoobiya u danaynayso dekedaha dalalka dariska la ah? - BBC News Somali
Image caption Dr Abiy ayaa balanqaaday furfurnaan ganacsi
Itoobiya oo soo afjaraysa "shuruucda tacadiyada horseeday"
Lahaanshaha sawirka JAMES JEFFREY
Mas'uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in shirkadda DP World ay saamigeeda kasii iibisay Itoobiya, taasna ay xaq u leedahay.
Image caption Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jabuuti
Iyada oo uu xaalka halkaas marayo ayaa bishii hore dabo yaaqadeeda waxaa Jabuuti booqasho rasmi ah ku tagay Ra'isulwasaaraha cusub ee Itoobiya Dr Abiy Axmed, kaas oo la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Image caption Al Bashir, madaxweynaha Jabuuti
Sida uu qorey wargeyska Daily Nation, heshiiska waxaa ka mid ah heshiis horey labada dowladood ay u galeen oo lagu magacaabo LAPSET, kaas oo la'isku xirayo dekada Lamu iyo dalka Itoobiya.
Sargaal kale oo hadlay waxa uu sheegay in Itoobiya ay qeyb ku lahaan doonto go'aamada ku saabsan jaangooyada canshuuraha dekeda Sudan.
Ra'isulwasaaraha cusub Dr Abiy ayaa balanqaaday furfurnaan xagga ganacsiga, taasna waxa ay horseedi doontaa in waxyaabaha la dhoofinayo ama lasoo dajinayo ay aad u kordhi doonaan.